Ulwazi lwe-Homestay - Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
Indawo yokuhlala kunye neendawo yokuhlala
Ukuhlala kwikhaya lendawo ngumbono olungileyo kuba unokuziqhelanisa nesiNgesi sakho imini yonke. Abaphathi bakho baya kuba nenkathalo kwaye baxhase ngelixa ukunye nabo.
Sinikezela nokuba ukhwele ukuya phakathi indawo yokuhlala ibhdi nesidlo sakusasa or ukuzityisa.
Amakhaya ethu ahlukile: iintsapho ezinabantwana, izibini ezindala okanye abantu abangatshatanga. Ngokuhambelana nemithetho yokuziphatha yesikolo, sijolise ekubekeni abafundi bethu ukuba babe namakhaya amakhaya angamaKristu.
Uya kuba negumbi elinye (kukho namagumbi angamawele abantu abatshatileyo). Ngamanye amaxesha kusenokubakho abanye abafundi ekhaya abavela kwelinye ilizwe.
Nceda uqaphele ukuba sinokukuhlela kuphela indawo yokuhlala ukuba ufunda kwiikhosi zethu eziqhelekileyo okanye eziqhelekileyo zesiNgesi, kungekhona izifundo zethu zesikhathi.
Amagumbi okuhlala abafundi ngoJulayi nango-Agasti
kuba Julayi noAgasti kuphela sibabonelela ngokwamagumbi okuhlala abantu abazenzela ukutya ngemizuzu emi-5 ukusuka esikolweni kwisakhiwo iYMCA. Igumbi ngalinye lifakwe
ibhedi enye enebhedi
ikhabhathi enkulu yempahla
ifriji enkulu / efrijini
Uya kwabela igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela kunye nabanye abafundi. Kukho indawo yokuzivocavoca esakhiweni, kunye neziko lezemidlalo kunye nendawo yokubhukuda esecaleni komnyango.
Ukhwele ukuya phakathi
Isiqingatha-ibhodi sibandakanya isidlo sakusasa kunye sangokuhlwa, ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu kwaye konke ukutya ngeempelaveki.
Oku kubandakanya isidlo sakusihlwa kodwa kufuneka ube nazo zonke ezinye ukutya kwindawo yokutyela okanye i-cafe.
Unayo igumbi ekhaya kunye nosapho kwaye upheka ukutya kwakho ekhitshini.
Abanye abafundi bahlela indawo yabo yokuhlala okanye kufuphi naseCambridge.